စကတည်းကယဉ်သကို | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Other - Non Channelized » စကတည်းကယဉ်သကို
Posted by Shwemannmay on Jun 14, 2010 in Other - Non Channelized | 1 comment
ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီဆိုင်များ ကို ရန်ကုန်မြို့ပေါ်တွင် ဇွန်လ ၁၀ ရက်နေ့မှ စတင်ဖွင့်လှစ် ရောင်းချပြီဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဒီဇယ်ဆီဈေးမှာ တစ်ဆိုင်နှင့် တစ်ဆိုင် ကွာခြားမှု အချို့ရှိကြောင်း သိရသည်။
လက်ရှိ ဖွင့်လှစ်ရောင်းချသည့် ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီဆိုင်များထဲတွင် မြ၀တီ၊ နီလာရိုးမအမည်ရှိ စက်သုံးဆီဆိုင်များမှ ရောင်းချသည့်ဒီဇယ်ဆီ တစ်ဂါလန်လျှင် ကျပ် ၂၈၅၀ ဟူသည့် ဈေးမှာ ပုဂ္ဂလိကစက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်များ အားလုံးထဲတွင် အသက် သာဆုံးနှုန်းဖြင့် ရောင်းချသည့်ဆိုင်များဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကင်းမြို့နယ်အတွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသည့် PETRO K အမည် ရှိ ပုဂ္ဂလိကစက်သုံးဆီဆိုင်မှာ ဒီဇယ် အား လီတာဖြင့်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့် တစ်လီတာ ကျပ် ၆၅၀ နှုန်းအား ဂါလန်ဈေးဖြင့် ပြန်လည်တွက်ချက်မည်ဆိုပါက ဒီဇယ် တစ်ဂါလန်လျှင် ၂၉၂၅ ကျပ်ဝန်းကျင် အထိကျသင့်ကြောင်း ၀ယ်ယူသူများ က ပြောကြားခဲ့သည်။
HTOO ၊ မက်(စ်)မြန်မာကုမ္ပဏီ အုပ်စု စက်သုံးဆီဖြန့်ဖြူးရေး အရောင်းဆိုင်၊ New Day စက်သုံးဆီအရောင်းဆိုင်များ အပါအ၀င် အခြားဆိုင်များတွင်မူ ဒီဇယ်ဆီတစ်ဂါလန် ကျပ် ၂၉၀၀ နှုန်းဖြင့် စတင်ရောင်းချပေးလျက် ရှိသည်ဟု သိရှိရပါသည်။
”မြ၀တီနဲ့ နီလာရိုးမမှာ ဒီဇယ်တစ်ဂါလန်ကို ကျပ် ၂၈၅၀ နဲ့ ထည့် ခဲ့ရတယ်။ ရန်ကင်းစင်တာအနားမှာ ဖွင့်ထားတဲ့ PETRO K ဆိုင်မှာ ကျတော့ လီတာနဲ့ ရောင်းတယ်။ တစ်လီတာကိုကျပ် ၆၅၀ နှုန်းပါ။ ခြောက်ဂါလန်ထည့်မယ်လို့ ပြောတော့ ၂၇ လီတာထည့်ပေးတယ်။ ဒီတော့ တစ်ဂါလန်ကို ၄ ဒသမ ၅ လီတာရှိတာပေါ့။ အားလုံးပြန်တွက်ကြည့် ရင် တစ်ဂါလန်ကို ၂၉၂၅ ကျပ် ကျသင့်တယ်။ ဒါပေမဲ့ PETRO K ကတော့ မြို့တွင်းထဲမှာဆိုတော့ နီးနီး နားနားထည့်ရတာပေါ့။ မြ၀တီဆိုင်ကတော့ အောင်မင်္ဂလာ အဝေးပြေး အလွန်လေးမှာ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီလမ်းကြောင်းပေါ် သွားနေတဲ့သူတွေကတော့ ကျွန်တော်တို့ မြို့တွင်းထဲက လူတွေထက် ဒီဆယ်တစ်ဂါလန်ကို ကျပ် ၅၀ ကနေ ၇၅ ကျပ်အထိ သက်သက်သာသာ သုံးရတာပေါ့”ဟု ပုဂ္ဂလိက စက်သုံးဆီဆိုင်များတွင် ၀ယ်ယူခဲ့သူတစ်ဦးက ပြောပြခဲ့သည်။
ပုဂ္ဂလိကစက်သုံးဆီဆိုင်များ၏ ၀န်ဆောင်မှုပိုင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၀ယ်ယူခဲ့သူတစ်ဦးက ”ကျွန်တော် PETRO K မှာဝယ်တုန်းက အရင်ကလို ယာဉ်မောင်းကဆင်းပြီး ဆီ ဆိုင်ကီဖွင့်ပေးရတာ ဘာညာမရှိတော့ဘူး။ ဆီထည့်မယ်ဆိုရင် ထိုးရပ်ပေးလိုက်ရုံပဲ အဲဒီက၀န်ထမ်းကောင်လေးတွေ၊ ကောင်မလေးတွေက သူတို့ ဘာသာသော့တောင်းပြီး ဖွင့်ထည့်ပေးလိုက်တယ်။ ငွေချေတော့လည်း သူတို့ဘာသာပဲချေတယ်၊ ဘောင်ချာလာပေးတယ်။ ကားထဲကနေ အေးဆေးနေယုံပဲ ဒါတစ်ခုတော့ သာတယ်ဗျာ။ တခြားဆိုင်တွေလည်း ဒီလိုပဲ ၀န်ဆောင်မှုပေးတယ်လို့ ကျွန်တော် ကြားရတယ်”ဟု ရှင်းပြခဲ့ပါသည်။
”မက်(စ်)မြန်မာ၊HTOO နဲ့ စမ်းချောင်းမှာဖွင့်ထားတဲ့ New Day စက်သုံးဆီ အရောင်းတွေဆိုရင် ဒီဇယ်ဆီတစ်ဂါလန်ကို အကုန်လုံး ကျပ် ၂၉၀၀ နဲ့ ရောင်းတယ်။ ဓာတ်ဆီကတော့ တစ်ဂါလန်ကိုကျပ် ၂၅၀၀ နဲ့ ဆိုင်တိုင်းရောင်းပေးတာ တွေ့ရတယ်။ မတူတာက ဒီဇယ်ပဲမတူတာ”ဟု ၀ယ်ယူခဲ့သူတစ်ဦးက ရှင်းပြခဲ့သည်။
ဓာတ်ဆီကိုမူ ဆိုင်များအားလုံး မှတစ်ဂါလန် ကျပ် ၂၅၀၀ ဖြင့် တစ်သမတ်တည်း ရောင်းချပေးလျက်ရှိ ကြောင်း၊ လာမည့်နှစ်လအထိ အဆိုပါ တစ်ဂါလန် ကျပ် ၂၅၀၀ နှုန်းဖြင့် ဆက်လက် ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်သည် ဟုသိရသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင် စတင်ဖွင့်လှစ် ရောင်းချနေသည့် ပုဂ္ဂလိကစက်သုံးဆီ အရောင်းဆိုင်အချို့နှင့် ရောင်းချသည့် ဈေးနှုန်းများ (ဇွန်လ ၁၁ ရက်နေ့ဈေးများ)
ဆိုင်အမည် အရေအတွက် ဓာတ်ဆီ(ကျပ်) ဒီဇယ်(ကျပ်)
PETRO K တစ်လီတာ – ၆၅၀
HTOO တစ်ဂါလန် ၂၅၀၀ ၂၉၀၀
မက်(စ်)မြန်မာ တစ်ဂါလန် ၂၅၀၀ ၂၉၀၀
သူရိယ တစ်ဂါလန် ၂၅၀၀ –
ST Oil တစ်ဂါလန် ၂၅၀၀ –
KZH တစ်ဂါလန် ၂၅၀၀ –
NEW DAY တစ်ဂါလန် ၂၅၀၀ ၂၉၀၀
နီလာရိုးမ တစ်ဂါလန် ၂၅၀၀ ၂၈၅၀
မြ၀တီ တစ်ဂါလန် ၂၅၀၀ ၂၈၅၀
တစ်ဆိုင်တစ်ဈေးနဲ့တော်ကြာ ပြိုင်တက်ကုန်ကြရင် ဒုက္ခပါပဲ ။ မော်တော်ကားတို့ ဆိုင်ကယ်တို့ မီးစက်တို့ ဆိုတာတွေကေ၇ထည့်မောင်းလို့ ရတာမပာုတ်တော့ ….
အင်း… မပြောကောင်းမဆိုကောင်း ဓါတ်ဆီဈေးတွေတက်လို့ဓဓီါတ်ဆီအသုံးပြုနေရတဲ့ လုပ်ငန်းတွေက ပါ အသီးအသီး ဈေးတွေတက်ကုန်ကြမှဖြင့်
ဘုရားဘုရား…. :-( မူရင်း link က ဒီမှာပါ။ ရွှေမန်းမေက Eleven media group ပရိသတ်ပါ။ နေ့ တိုင်းနီးပါး ၀င်ဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။
အင်း စကတည်းကယဉ်သကို ဆိုသလို တော့ ဖြစ်နေပြီ။ ဓါတ်ဆီဈေးတွေမတက်ပါစေနဲ့ ။ ဆိုင်ထုတ်ဈေးကို က ၂၉၀၀ ဆိုမှတော့ လက်လီက ခုန်တက်တော့မှာပေ့ါ
တစ်ဂါလံ တစ်ဂါလန် ဒီဇယ်ဆီ ဒီဆယ်ဆီ
တစ်ခုပဲ ဆိုးဆိုးဝါးဝါးတော့ အဖြစ်မခံဘူး ပြဿနာ မတက်အောင်တော့ ထိန်းမယ်။
ုဖြစ်လာရင် ဈေးကွက်သဘောအရလို့ ပဲပြောတော့မယ်။